China Cold Room Evaporator/Air-Cooler Series DJ emepụta na suppliers |Igwe oyi
DJ series Unit Cooler/ije na ngwa nju oyi dabara adaba na obere okpomọkụ -25 degrees.
DL, DD, DJ usoro oyi nchekwa evaporators nakweere ọla kọpa tube stamping na akpụ aluminom ntù, nke nwere nnukwu okpomọkụ nyefe arụmọrụ.Igwe nju oyi a na-eji bụ ihe na-egosi mmiri, na-ajụ oyi ngwa ngwa, gbachiri nkịtị, kwụsiri ike na ntụkwasị obi na-arụ ọrụ.Igwe ọkụ na-agbaze ọkụ eletrik na-anabata tube nke igwe anaghị agba nchara, na tube kpo oku finned na-abanye n'ime ime ụlọ ahụ, oge nkwụsịtụ dị mkpụmkpụ, mmetụta ahụ pụtara ìhè;A na-eji efere ígwè dị elu mee shei dị n'èzí, nke a na-efesa na nkà na ụzụ rọba, nguzogide corrosion, mma mara mma, na nke bara uru.
DL, DD, DJ usoro n'elu ụlọ kpọgidere ikuku coolers nwere ike iji na njikọ na Compressor condensing nkeji dị iche iche ike jụrụ, na ike ga-eji dị ka refrigeration akụrụngwa na oyi na-atụ nchekwa na dị iche iche okpomọkụ.Usoro DL dabara adaba maka nchekwa okpomọkụ nke 0 Celsius ma enwere ike iji ya na nchekwa oyi maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, olu, wdg.
Usoro DD kwesịrị ekwesị maka nchekwa oyi na okpomọkụ dị gburugburu 18 Celsius, a na-ejikwa ya na-echekwa nri oyi kpọnwụrụ dị ka anụ, ice cream, na azụ;usoro DJ kwesịrị ekwesị maka anụ oyi kpọnwụrụ na nri mmiri na -23 Celsius.
8. Na-emepụta usoro: efere efere, tube ekwe, ọkpọ ọkpọ, ịgbasa tube, ịgbado ọkụ, leakage ule, nnyocha, mbukota.
Nke gara aga: Igwe nju oyi dị n'okpuru ala
Osote: DD Evaporator refrigeration maka nchekwa oyi
DD120 120㎡ oyi nchekwa ọkara okpomọkụ eva ...
DD160 160㎡ oyi nchekwa ọkara okpomọkụ eva ...
DD80 80㎡ oyi nchekwa ọkara okpomọkụ evapo ...
DJ30 30㎡ nchekwa oyi dị ala okpomọkụ evaporator
DD22 22㎡ oyi nchekwa ọkara okpomọkụ evapo ...